Matetika dia iniana disoana hatrany ny resaka momba ny fampandrosoana ny faritra ity, ao aza ny mamadika azy hoe adi-poko sy fampiadiana ny samy Malagasy. Ohatra iray mitohaka amin'ny tenda ity zavatra mitranga eny ambany tanàna, araka ny anarana hilazan'ny sasany azy.Raha raisintsika ohatra Ambodin'Isotry, izay ao avokoa ireo mpivarotra lehibe momba ny pièce automobile, ny kojakoja fanamboarana trano, ireo grossiste maro. Mandoa hetra avy hatrany any amin'ny foibe izy ireny, zara raha misy vola miditra amin'ny fokontany, nefa ny toerana dia maloto, voretra, anjakan'ny tsy fandriam-pahalemana, tsy manana asa ny ankamaroan'ny mponina, tsy misy rano madio, ny trano zara raha azo hipetrahana. Nefa raha nomena ny Faritra, Ambodin'Isotry izy eto, fa tsy hoe any amin'ny sisin-dranomasina, dia olona manana ny fahaizana sy ny traikefa no mitantana ny fokontany sy ny vola ary ny harena rehetra aterak'ireo magazay lehibe rehetra ireo, dia tokony mbola toy izao ve io fokontany sy faritra io?
lundi, 01 février 2021 17:18
Antenimieram-pirenena : Mampatsiahy ny fitsipika anaty ny filohany
Antenimieram-pirenena : Mampatsiahy ny fitsipika anaty ny filohany (Jereo Sary Tohiny)
vendredi, 29 janvier 2021 22:35
PM à Maroantsetry
PM accompagné du ministre de la défense nationale, ministre de l'intérieur, ministre de la population à Maroantsetry 28 janvier 2021. (Voir Suite Photo)
vendredi, 29 janvier 2021 09:51
Maroantsetra : Nitsidika kaominina maromaro ny Praiminisitra, nampanantena ny route de la Concorde
Tonga teto Maroantsetra omaly alakamisy 28 janoary ny Praiminisitra Ntsay Christian, niaraka tamin'ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny minisitry ny atitany, ary ny minisitry ny mponina. Nandeha ny fiaramanidina TOA 5R-AMR izy tamin'izany, ary nitsidika ireo Kaominina maromaro ivelan'ny tampon-tanànan'i Maroantsetra. Nihaona tamin'ireo mpandraharaha ihany koa ny Praiminisitra, ka anisan'ny nampanantenainy tamin'izany ny anamboarana ny route de la concorde mampitohy an'i Toamasina, Mananara, Maroantsetra, Antalaha.
mercredi, 27 janvier 2021 08:46
Etats-Unis : Nanao fianianana ireo Loholona 100 hitsara an'i Donald Trump
Nanao fianianana teo anivon'ny Antenimierandoholona ireo Loholona 100 hitsara ny raharaha anenjehana ny filohan'ny Etats-Unis teo aloha Donald Trump, tamin'ny famporisihina hitroatra, izay niteraka fanimban-javatra sy faty olona tao amin'ny Lapan'ny Kongresy amerikanina, tamin'ny andro nanamarinana ny vokam-pifidianana ho filoham-pirenena amerikanina. Niezaka anakana izany fitsarana izany ireo Repoblikanina, iray antoko amin'i Donald Trump, satria arak'izy ireo dia tsy manana fahefana hitsara olona efa tsy Filoham-pirenena intsony ny Loholona, ary mifanohitra amin'ny Lalapanorenana amerikanina izany. Hanomboka ny 9 febroary izao ity fitsarana ny filoha teo aloha ity eo anivon'ny Loholona amerikanina. Nisedra tsy fahasalamana tampoka moa omaly ny filoha hitarika ity fitsarana ity, ka nahiditra hopitaly aingana, izy moa no zoky olona indrindra amin'ny Loholona, izay voatendrin'ny lalàna mitarika izany fitsarana izany.
mercredi, 27 janvier 2021 08:19
Faritra Betsiboka : Mbola tsy manana Governora efa 16 volana aty aoriana
Tamin'ny 25 septambra 2019 no voatendry ireo andiany voalohany tamin'ny Governoram-paritra niisa 11, niandry ny 12 febroary 2020 indray ny andiany faharoa niisa 2 tamin'ireo Faritra 22, nitohy tsikelikely teny indray ny 4 marsa 2020 nenindra 1 hafa, ary ny 1 hafa manaraka ny 05 aogositra 2020, ary efa tany amin'ny 11 novambra vao nanendry 3 hafa, izay sambany vao nisy vehivavy 2 tamin'ireo telo voatendry. Ny Faritra Betsiboka sisa tavela tsy manana Governora voatendry efa 16 volana aty aoriana.Ny olona atokisana ve no tsy misy, sa ny zanaky ny Faritra tsy manana olona manam-pahaizana sy manana traik'efa amin'izany, sa ny Faritra Betsiboka no adino ka tsy hisy fandrosoana, hoy ireo zanaky ny Faritra. Hatreto moa ilay filazana hisian'ny Faritra vaovao hameno ny 22 efa misy ankehitriny mbola tsy nisy tohiny haha 23 isa ny Faritra.
mercredi, 27 janvier 2021 08:08
Mahazoarivo : Namory maika ny “OMC-National” ny Praiminisitra
Nampiantso fivorian’ireo miandraikitra ny fandriampahalemana manerana ny Nosy (Organisme Mixte de Conception - niveau national) sy ireo mpikambana ao amin’ny governemanta voakasik’izany ny Praiminisitra Ntsay Christian ny talata 26 janoary 2021, teny amin'ny Lapan'i Mahazoarivo. Notsiahiviny fa ankehitriny dia efa voatsangana ny birao hitantana ny Antenimierandoholona ary tontosa ny fifamindran-toerana teo amin’ny filohan’izany andrim-panjakana izany : “taratry ny demokrasia ary taratry ny maha-firenena tandalàna antsika izany”, hoy izy, ary nantitranteriny ny tokony hisian’ny fitoniana hatrany eto amin’ny firenena, ka nomarihiny fa manana adidy sy andraikitra ny rehetra, mba hiainan’ny vahoaka Malagasy ao anatin’izany fitoniana izany, ka anjaran’ny “OMC national” no mandray andraikitra amin’ny fampandriana ny fahalemana raha sanatria misy tranga fihantsiana miseho na endrika fanakorontanana hafa izay mety hanohintohina ny fiandrianam-pirenena. Nodinihina nandritra ny fivoriana ny lafim-piainan’ny vahoaka Malagasy amin’izao fotoana izao ka nojerena manokana ny mikasika ny rano sy ny jiro : nambaran’ny Praiminisitra fa manaraka ny toromarika nomen’ny Filohan’ny Repoblika, ny amin’ny tsy tokony hisian’ny fiakaran’ireo, ny “OMC”.
mardi, 26 janvier 2021 15:41
Vaomiera mpanamarina ny fitantanam-bolan'ny fampielezan-kevitra : Roa taona mbola tsy nisy tatitra
Ao amin'ny And-87 amin'ny lalam-pifidianana 2018-008 dia najoro ny vaomiera hanao ny fanaraha-maso sy ny fanambaràna ampahibemaso ny vola lanin'ny kandida nandritra ny fifidianana. Izany dia atao manomboka ny fetra 3 volana aorian'ny filazana ny vokatra ofisialy ny tsy maintsy hametrahan'ireo kandida tsirairay ny tatitry ny vola niditra sy nivoaka. Mazava ny lalam-pifidianana fa ny vola avy amin'ny mpikambana, ny antoko politika, ny olon-tsotra, ireo orinasa malagasy tsy miankina amin'ny fanjakana ihany no azo ampiasaina hamatsiana ny fampielezan-kevitra. Tsy maintsy misy rosia avokoa izany fanomezana izany. Voarara ny fampiasam-bola avy any ivelany. Efa dila ny roa taona izao nahavitan'ny fifidianana ho Filoham-pirenena, mbola tsy nisy hatreto izay tatitra izay. Ireto avy ny mpikambana ao anatin'izany rafi-panjakana mpanara-maso izany, araka ny didim-panjakana laharana 2018-903 ny 1aogositra 2018 :
mardi, 26 janvier 2021 11:09
“Lundi noir” : Feno roambinifolo taona androany
26 janoary 2009 - 26 janvier 2021, feno roambinifolo taona androany ny “Lundi noir”.
vendredi, 22 janvier 2021 21:00
Ministeran’ny Fitsarana : Mahabe resaka ny fanendrena tamin’ny « Note de service » ny Sekretera jeneraly mpisolo toerana
Namoaka « Note de service » ny Mpitahiry ny tombokasem-panjakana, minisitry ny fitsarana Andriamahefarivo Johnny Richard ny 20 janoary 2021 manendry Sekretera jeneraly mpisolo toerana. Ny Général de division Rasolofo Lumène no notendrena ho amin’izany andraikitra izany, taorian’ny nanendren’ny filohan’ny Repoblika ho Senatera an’i Imbiki Herilaza, Sekretera jeneraly tompon-toerana. Efa nofoanana nandritra ny filankevitry ny minisitra ny alarobia 20 janoary 2021 teo, rahateo ny didim-panjakana nanendrena an’ity farany tamin’io toerana io. Betsaka ny tohina tamin'io « Note de service » io. Re koa aza izao fa manambana ny hanao "Journée d'indignation" ireo Mpitsara amin'ny fitsarana manerana ny Nosy.Teknika be ny asa aman’andraikitry ny Sekretera jeneraly satria tsy maintsy mahafantatra amin’ny antsipirihiny ny pitsopitson'ny ministera sahaniny sy ireo mpiasa rehetra izy. Azo antoka fa tsy voafehin'io jeneraly io izany satria sady raha ny fikaroham-baovao dia tsy nivoaka avy ao amin'ny Sekolim-pirenena fanofanana ho mpitsara sy ho mpirakidraharaha na ENMG Tsaralalana izy, no tsy mpitsara, na koa mpisolovava, fa Mpanolontsaina teknika mpikambana tao amin’ny kabinetran’ny minisitra izy izao notendrena ho Sekretera jeneraly mpisolo toerana izao.